Izindatshana zikaJeff Kerr Martech Zone |
Imibhalo nge UJeff Kerr
Kukhona ukungezwani okungokwemvelo ekuthuthukisweni komkhiqizo phakathi kokuthuthuka nokuzinza. Ngakolunye uhlangothi, abasebenzisi balindele izici ezintsha, ukusebenza futhi mhlawumbe nokubukeka okusha; ngakolunye uhlangothi, izinguquko zingabuyela emuva lapho izixhumi ezijwayelekile zanyamalala ngokuzumayo. Lokhu kushuba okukhulu kakhulu lapho umkhiqizo ushintshwa ngendlela emangalisayo - kangangokuthi ungaze ubizwe ngomkhiqizo omusha. KwaCaseFleet sifunde ezinye zalezi zifundo kanzima, noma kunjalo